First Nepal India business online news portal2- Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपिकाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदलाइ प्रदान गरिने
सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद अलीलाई प्रदान गरिने भएको छ । शान्ति र अन्तरास्ट्रिय समन्वय जुटाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको तथा विशेष रुपमा छिमेकी मुलुक इरिट्रियासँगको बीस वर्षे लामो सीमासंघर्ष अन्त्य गर्दै शान्ति संझौताकालागि गरेको निर्णायक पहलकालागि अलीलाइ यो पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको नोबेल समितिले जनाएको छ ।
नर्वेको राजधानी ओस्लोमा १०० औं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता घोषणा समारोहमा अबी अहमदको नाम घोषणा गरिएको हो । आगामी डिसेम्बरमा ओस्लोमा आयाजना गरिने विशेष समारोहमा अबीलाइ करिब ९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको पुरस्कार, पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ ।
२०१८ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री बनेका अहमदले इरिट्रियासँगको शान्तिवार्ता पून थाल्ने घोषणा गरे । इथियोपिया र इरिष्ट्रियाबीच सन् १९९८ देखि २००० सम्म सीमा युद्ध चलेको थियो । अहमदको पहलमा २० वर्ष लामो सैनिक गतिरोध अन्त्य गर्दै यी दुइ मुलुकबीच गतवर्ष शान्ति सम्झौता भएको थियो । उनले आबीले सन् २०१८ को जुलाईमा इरिट्रियाका राष्ट्रपति इसियास अफवेर्कीसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसका साथै उनले विवादित क्षेत्रसमेत हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री भएयता आबीले इथियोपियामा निकै धेरै सुधारका कार्यहरू गरिसकेका छन् । पदस्थापनापछि उनले कानुन तथा नियम खुकुलो पार्नुका साथै १० हजारभन्दा बढी विपक्षी नेता तथा कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरे । त्यसका साथै राजनीतिक प्रतिशोधका कारण देश निकाला गरिएकालाई उनले फर्काउन पहल गरे ।
गरिबी र द्वन्द्वको चपेटाबाट गुज्रिरहेको इथियोपियामा शान्ति र विकासका लागि अबीले आर्थिक सुधारका धेरै महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको र तिनले प्रतिफल दिन शुरु गरेको इन्स्टिच्युटकी अध्यक्ष बेरिट रेइस–एन्डरसनले बताइन ।
शान्ति र सामन्जस्यकालागि नोबेल पुरस्कारले अबीको महत्वपूर्ण योगदानलाइ थप मजबुत बनाउँदै लैजाने समितिले अपेक्षा गरेको छ । इथियोपिया अफ्रिकाको दोश्रो ठूलो जनसंख्या र पूर्वी अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो ।
एउटा शान्तिपूर्ण, स्थिर र सफल इथियोपियाका कयौं सकारात्मक प्रभावहरु हुनेछन् जसले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुबीच भाइचाराको सम्बन्ध मजबुत पार्न मदत मिल्नेछ । पुरस्कारका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेलको इच्छाको प्रावधानहरुलाइ ध्यानमा राख्दै नर्वेजियन नोबेल समितीले अबी अलि अहमदलाइ यस वर्षको शान्ति पुरस्कारकालागि योग्य ठहराएको समितिले जनाएको छ ।
सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि २ सय २३ जना व्यक्ति तथा ७८ संघसंस्थासहित ३०१ को मनोनयन परेको थियो । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अबी सहित न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डर्न र जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता ग्रेटा थनवर्ग पनि मनोनयमा परेका थिए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वय जिम्मी कार्टर र बाराक ओबामा लगायतका राजनीतिज्ञले समेत नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइसकेका छन् ।
को हुन अबी अहमद् अली?
सन् १९७६ अगस्त १५मा इथियोपियाको हालको जिमा क्षेत्रको बेशाशा शहरमा जन्मिएका अबी अहमदले कम्प्युटर साइन्समा स्नातक गरेका छन् । बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित ग्रिनविच विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका अबीले इथियोपियाको अदिस अबाबा विश्वविद्यालयबाट ‘शान्ति तथा सुरक्षा मुद्दा’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
सन् १९९१को शुरुवातमा उनी सशस्त्र संघर्षमा समेत सहभागी भएको थिए । आफना दाजुको मृत्यु भए पश्चात अबीले मेन्गिस्टु हैले मरियमको माक्सिस्ट–लेनिनिस्ट शासन व्यवस्था विरुद्ध संघर्षमा पनि उत्रिएका थिए ।
सन् १९९५ मा रुवान्डामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्तिदूतका रूपमा कार्य समेत गरेका अबी सन् २०१० मा राजनीतिमा प्रवेश गरेलगत्तै सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।
पूर्वसैनिक ‘इन्टेलिजेन्स अफिसर’ अबी इथियोपियाकाको सत्तारूढ दल इपीआरडीएफ र ओपीडीका सभापति हुन । त्यसका साथै उनी हाल अफ्रिकाकै सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख पनि हुन् ।
सी र मोदीबीचको अनौपचारिक वार्तामा के के कुराकानी भयो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मामल्लपुरममा शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म करीब पाँच घण्टा समय अनौपचारिक वार्तामा बिताएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार राती गरेको मिडिया ब्रिफिगंमा विदेश सचिव विजय गोखलेले दुवै नेताहरुले अनौपचारिक वार्तामा पाँच घण्टाको क्वालिटि टाइम बिताएको बताए ।
युनेस्कोको विश्व सम्पदा सुचीमा रहेको शोर मन्दिरमा आयोजना गरिएको आधा घण्टाको कलाक्षेत्र साँस्कृतिक प्रस्तुति बाहेकको समय उनीहरुले एक्लाएक्लै कुराकानीमा बिताएको गोखलेले जानकारी गराए । दुइ दिने अनौपचारिक भ्रमणमा क्रममा शुक्रबार साँझ चेन्नइबाट मामल्लपुरम पुगेका सीलाइ मोदीले महाभारतका पात्र अर्जुनले तपस्या गरेको स्थलको प्रांगणमा स्वागत गरेका थिए । दक्षिण भारतीय पहिरनमा रहेका मोदीले सी लाइ त्यहाँबाट साँस्कृति धरोहरको अवलोकन गराउँदै कुराकानीको क्रम अगाडि बढेको थियो ।
राष्ट्रपति सीलाई चेन्नईको विमानस्थलमा तामिलनायडुका राज्यपाल वनवारीलाल पुरोहितले स्वागत गरेका थिए । चेन्नई विमानस्थलमै साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर सीको पारम्परिक तरीकाले स्वागत गरिएको थियो । सिले यो स्वागतको प्रशंसा गरेका थिए । सी चेन्नईबाट मामल्लपुरमकालागि प्रस्थान गरेका थिए ।
चीनको वुआनमा अप्रिल २०१८मा भएको सी मोदीको अनौपचारिक वार्ताको दोश्रो श्रृखंलाको रुपमा यो अनौपचारिक शिखर वार्ता रहेको छ । भारत र चीनबीच दोक्लाम विवाद चर्किएको समयमा यो अनौपचारिक वार्ताको वातावरण मिलाइएको थियो । त्यतिबेलाको भारत चीन सम्बन्धको पृष्ठभुमि र अहिलेको अवस्थामा खासै तात्विक भिन्नता आएको छैन् । उतिबेला भारत,भुटान र चीनको त्रिपक्षिय साँधमा रहेको दोक्लामको सीमामा भारत र चीनका सेनाहरुबीच घम्साघम्सी परेको थियो ।
अहिले भारत सरकारले जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज सँगै चीनको चासो रहेको कश्मीरबाट अलग्गयाएर लद्दाकलाइ केन्द्र शासन मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयमा एकातिर पाकिस्तानको चर्को विरोध छ भने अर्कोतिर चीनले समेत यो मुद्दामा एक समय खुलेर पाकिस्तानको साथ दिएको देखिएको छ ।
व्यापार मुख्य आवश्यक्ता
यद्यपि यो पृष्ठभुमिमा समेत यो अनौपचारिक शिखर वार्ताकालागि दुवै मुलुक तयार भएका कारण व्यापारीक सम्बन्ध नै प्रमुख देखिएको छ । चीनका उत्पादनकालागि भारत ठूलो बजार रहेको छ भने भारतकोलागि चीन व्यापारिक साझेदार । एक अर्काको आवश्यक्ता र महत्व दुवै मुलुकले बुझेका कारण नै हुन सक्छ, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो अनौपचारिक भेट संभव भयो । यद्यपि चीनले बीआरआइ परियोजनामा भारतको साथ पाएको छैन् । भारतको साथ नपाएसम्म चीनको पाकिस्तान सम्मको सीपेक परियोजना अपुरो हुन्छ ।
सास्कृतिक धरोहरको अवलोकनमा भएको छलफल
यद्यपि यी कुराहरुलाइ थाति राख्दै शुक्रबार दुवै नेताहरुबीच द्धिपक्षिय हित र चासोका मुद्दाहरुमा वृहत छलफल भएको छ । गोखलेका अनुसार मोदीले दक्षिण भारतको चीनसँगको ऐतिहासिक तथा व्यापारिक सम्बन्धबारे चर्चा गरेका थिए । बोधिधर्माको उदाहरण पनि उल्लेख गरिएको थियो । बोधिधर्माले तामिलनायडुबाट बुद्धिज्मको प्रचार चीन र जापान सम्म पुरयाएका थिए ।
अर्जुन तपस्यास्थलमा भएका मनुष्य र जनावरका कलाकृति देखाउँदै प्रकृतिप्रेमी मोदीले जीवनयापनकालागि प्राकृतिका यी दुइ प्राणीहरु बीचको एकताबारे सीलाइ बिस्तार गरेका थिए । त्यसपछि मोदीले सीलाइ गणेश रथ देखाएका थिए । पल्ल्व वंशले १३०० वर्ष पहिला बनाएको यो मन्दिरको मान्यता वर्तमान सभ्यता र जीवीत सँस्कृतिमा पनि रहेको र अहिले पनि सो मन्दिरमा पुजा अर्चना हुने वास्तविकता साझा गरेका थिए ।
ऐतिहासिल स्थलको अवलोकन पछि सीले यी पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक कतिपय धरोहरबारे आफू जानकार रहेको भन्दै यस्ता कुराहरुबाट द्धिपक्षिय सम्बन्धमा उपयोग गर्ने बारे चासो राखेका थिए ।
डिनर टेबलमा के भयो कुराकानी ?
डिनर टेबलमा झण्डै दुइ घण्टा बिताएका दुइ नेताले खुला र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वन एण्ड वन कुराकानी गरे । दुवै नेताहरुबीच राष्ट्रिय हित, आ–आफ्ना सरकारका प्राथमिकताका विषयमा बिस्तारमा कुराकानी भएको थियो ।
प्रधामन्त्री मोदीले सीलाइ आफू जनताको मतका आधारमा पून दोश्रो पटक चुनिएर आएको बताउँदै आर्थिक विकास अबको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका थिए । सीले मोदीको कुरामा समर्थन जनाउँदै आफू भारत सरकारसँग निकै नजीक भएर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
तस्वीर साभार:नरेन्द्र मोदी ट्वीटर
उनीहरुबीच दुइ मुलुकको आर्थिक,व्यापारिक तथा लगानी प्रोत्साहित गर्नकालागि संभाव्यताका क्षेत्रहरुबारे पनि छलफल भएको थियो । व्यापारको आकार र मूल्य कसरी बढाउने बारे पनि छलफल भयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीनसँगको व्यापार घाटा र असंतुलनका बारेमा पनि चिनपिङसँग चासो राखेका थिए ।
आतंकबादका मुद्दाहरुमा दुवै मुलुकले झेलिरहेको समस्या दुइ नेताहरले साझा गरेका थिए । दुवै नेताहरुले आ–आफ्ना मुलुकको आकार वृहत भएको भन्दै कट्टरवाद दुवै मुलुकको चासोको विषय रहेको स्वीकार गरेका थिए । दुवै मुलुकको बहुजातिय , बहुसाँस्कृति र बहुधार्मिक समाजलाइ जोगाउन सँगै मिलेर काम गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । यो छलफलको सार आतंकबाद दुवै मुलुकको साझा समस्या थियो ।
शनिबार क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा कुराकानी हुने
शनिबार पनि सी र मोदीबीचको वान टु वान छलफल जारी रहनेछ । जसमा क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरुका विषयमा यी दुइ नेताहरुले कुराकानी गर्ने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । मोदीको पहिलो कार्यकाल देखि अहिले सम्म चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग अन्य १७ पटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।
चेन्नईको मामल्लपुरमा सी–मोदी भेट
दुइ दिने अनौपचारिक यात्राका क्रममा भारत आइपुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार झण्डै पाँच घण्टाको समय सँगै बिताएका छन् । चेन्नई विमानस्थलमा शुक्रबार दिउँसो २ बजे उत्रिएका सीलाइ विमानस्थलमा तामिलनायडुका राज्यपाल वनवारीलाल पुरोहितले स्वागत गरेका थिए । चेन्नई विमानस्थलमै साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर सीको पारम्परिक तरीकाले स्वागत गरिएको थियो ।
त्यहाँबाट ४ बजे सी झण्डै ५८ किलोमिटर दक्षिणको मामल्लपुरम पुगे । मामल्पुरममा सीलाइ दक्षिण भारतीय पारम्परिक पहिरनमा पहिरनमा मोदीले स्वागत गरेका थिए । मोदीले सीलाइ मामल्लपुरमका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक धरोहरहरुको व्याख्या गर्दै अवलोकन गराए ।
यो भेट एकदमै अनौपचारिक रुपमा भएको थियो । सी पनि औपचारिक पोशाकमा थिएनन । औपचारिक भ्रमणमा टाई सुटमा देखिने सी मामल्लपुरमा प्यान्ट सर्टमा नै घुमिरहेका थिए ।
मोदीले सीलाइ कुन्ती पुत्र अर्जुनले तपस्या गरेको स्थान ‘अर्जुनको तपस्या स्थल’ देखाएका थिए । महाभारतका पाँच पाण्डवहरुको नाममा बनेको ‘पँच रथ’को अवलोकन गराएका थिए । त्यसैगरी मोदीले सीलाइ सबै स्थलहरुबारे आफैले व्याख्या गर्दै अवलोकन गराएका थिए । गणेश मन्दिरको दर्शन पछि दुवै शक्तिशाली नेताहरु पंचरथ मन्दिरमा केहि बेर बसे र कुराकानी गरेका थिए ।ऐतिहासिक, साँस्कृतिक संरचनाहरु , ढुँगामा कुदिएका सदियौं पुराना मुर्तिकलाालाइ सीले पनि बडो चाख दिएर अवलोकन गरेको दृश्य देखियो ।
चीन र भारत दुवै साँस्कृतिक रुपमा सम्पन्न मुलुक हुन । मोदीको पहिलो वुआन शिखर वार्ताका क्रममा चीनका राष्ट्रपतिले पनि आफना धरोहरहरुको अवलोकन गराएका थिए । पुरातात्विक साँस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा चीन निकै गभ्भीर छ । भारतले पनि ऐतिहासिक, पुरातात्विक र साँस्कृतिक महत्वका धरोहरहरुलाइ विश्व सामु पर्यटकीय प्रवद्र्धनकोलागि उपयोग गर्ने गरेको छ ।
गणेश मन्दिरको अवलोकन पछि सी र मोदी शोर मन्दिरमा पुगे । जहाँ दक्षिण भारतको कला र संस्कृति झल्किने परम्परागत नृत्यहरु सहितको साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
मोदीले सीसँगको अनौपचारिक वार्ताको लागि दक्षिण भारतको मामल्लपुरम नै छनौट गर्नुको पछाडि दुइ तीन वटा कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पहिलो, दक्षिण भारतमा भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक पकड कमजोर रहेको छ । पछिल्लो समयमा हिन्दीलाइ राष्ट्रिय भाषाको रुपमा बनाउने सरकारले गरेको घोषणाले यो क्षेत्रका राजनीतिक दलहरु झनै बिच्किएका थिए । जसको भर्पाइ स्वरुपमा मोदीले अमेरिकाको ह्युस्टनमा आयोजना गरिएको हाउडी मोदी कार्यक्रममा तामिल भाषामा समेत सम्बोधन गरेका थिए । अहिले सीको भ्रमणकोलागि यही क्षेत्र रोजेर उनले राज्यका द्रबिडियन दलहरुलाइ भाजपा नेतृत्वको सरकार तामिलनायडु राज्यको विकासकालागि गम्भीर छ भन्ने संदेश दिन खोजेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
दोश्रो, दक्षिण भारत कला र संस्कृतिमा निकै सम्पन्न छ । विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत शोर मन्दिर यही छ । त्यसका अलाबा कदम कदममा विश्वका पर्यटकहरुलाइ आकर्षित गर्न सक्ने साँस्कृति सम्पदाहरु छन् । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखले यी सम्पदाहरुको अवलोकन गर्दा विश्वमै यी स्थलहरुको प्रचार प्रसार हुने विश्वास पनि गरिएको छ । दक्षिण भारतको साँस्कृति धरोहर विश्व सामु राख्ने अवसरको रुपमा पनि मोदीले प्रयोग गरेको हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
तेश्रो,दक्षिण भारतमा पल्लव वंश सत्तामा आएपछि चिनियाँहरुसँग व्यापारिक र रक्षा सम्बन्ध गाँसेको इतिहास रहेको अध्ययनहरुमा पाइएको छ । पल्लव वंशका राजा नरसिंह वर्मन प्रथमले एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको हैसियतमा चीनसँग तिब्बतमाथि नजर राख्न सहयोग गर्ने सहमति गरेका थिए ।
चीनका एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुहरु मध्येका एक बोधिधर्म पल्लव राजाको तेश्रो पुत्र रहेको पनि मानिन्छ । उनले काँचीपुरमको मामल्लपुरमदेखि चीनसम्मको यात्रा तय गरेका थिए ।
चौथो र मुख्य कुरा २००० वर्ष अघि यो शहरबाट भारत र चीनबीच द्धिपक्षिय व्यापारको बिजारोपण भएको मानिन्छ । आज द्धिपक्षिय व्यापार ६० अर्ब डलर पुगेको छ ।
अहिले तामिलनायडु राज्य चिनियाँ लगानीको केन्द्र पनि हो । थुप्रै चिनिया औद्योेगिक कल कारखानाहरु यही क्षेत्रमा छन् । अहिले चीन भारतको दोश्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ भने भारत दक्षिण एशियामा चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक भागीदार हो ।
तर भारत र चीनबीचको व्यापारमा भारतले उच्च व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । यी दुइ मुलुकबीच बेलाबेलामा अरुणान्चल क्षेत्रमा सीमा विवाद , र पाकिस्तानलाइ समर्थन देखाइरहने चीन बीच चिसोपना पनि आइरहेको छ । पछिल्लो समयको कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीका कारण पाकिस्तानले माँगेको समर्थन र लद्दाकलाइ अलग राज्य बनाउँदै केन्द्र शासन अन्तर्गत ल्याउने भारतको निर्णयमा चीनको आपत्ति रहेको देखिएको छ ।
शनिबार बिहान १० बजे ताज फिसरम्यान्स कोभ रिसोर्टमा मोदी र सीबीच एक्लाएक्लै करीब एक घण्टा कुराकानी हुने कार्यक्रम रहेको छ । १० बजेर ५० मिनेटमा उच्च स्तरिय प्रतिनिधीमण्डल सहित छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । दिवाभोज सम्म चल्ने यो छलफलमा द्धिपक्षिय व्यापार, आतंकबाद र सीमा विवादका विषयमा छलफल हुने भारतीय पक्षको भनाइ छ । एक घण्टाको यो छलफल पछि मोदीका तर्फबाट आयोजना गरिएको लन्चमा सी सहभागी हुनेछन् ।
त्यसको एक घण्टा पछि अर्थात १२ बजेर ४५ मिनेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति चेन्नई एयरपोर्टकालागि प्रस्थान गर्नेछन् । त्यहाँबाट १ बजेर ३० मिनेटमा उनी नेपालको राजकीय भ्रमणकालागि काठमाडौ तर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चेन्नई पुगे
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुइ दिने भारत भ्रमणका क्रममा चेन्नई पुगिसकेका छन् । तामिलनायडुका राज्यपाल वनवारीलाल पुरोहितले उनलाइ विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । विमानस्थलमा पारम्परिक तरीकाबाट सीको स्वागत गरिएको छ ।
त्यहाँबाट सी मामल्लापुरमकालागि प्रस्थान गर्नेछन् । सी र मोदीको भेट मामल्लिपुरममा साँझ ५ बजे हुने कार्यक्रम रहेको छ । सीको स्वागतकालागि प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदी यस अघि नै चेन्नई हुँदै मामल्लापुरम पुगिसकेका छन् । मामल्लिपुरमा उनीहरुबीच आजै अनौपचारिक भेटघाट हुनेछ ।
अनौपचारिक भेटघाट भएको हुँदा यो भेटपछि न कुनै संयुक्त घोषणापत्र न कुनै औपचारिक प्रस वक्तव्य जारी हुन्छ । चेन्नईदेअि मामल्लपुरम सम्म सीकोलागि सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ । सुरक्षकर्मीहरुका साथै गली गलीमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
नेपालको राजकीय भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको १९ घण्टा
चिनियाँ राष्ट्रपति शनिबार तामिलनायडु राज्यको चेन्नई विमानस्थलबाट दिउँसो १ः३५ बजे काठमाडौंकालागि उडनेछन् । चाइना एयरलायन्सको विशेष विमानबाट भारत आएका सी नेपालको राजकिय भ्रमणकालागि काठमाडौं जानेछन् ।
काठमाडौको त्रिभुवन विमानस्थलमा सीको विशेष विमान करीब ४ः३० देखि ५ः३० बजेसम्म उत्रने अनुमान गरिएको छ । चेन्नईदेखि काठमाडौंको हवाइ दुरी झण्डै १७ सय किलोमिटर रहेको छ । यो दुरी चार घण्टाभित्र तय गर्न सकिने हुँदा सी ५ देखि ५ः३० बजेसम्म त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरिसक्ने अनुमान गरिएको हो ।
सीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले
शनिबार साँझ देखि आइतबार बेइजिंग फर्किनु अघि सीको काठमाडौंको कार्यक्रम यस्तो रहेको छ ।
सीको बस्ने व्यवस्था काठमाडौंको सोल्टी होटलमा गरिएको छ ।
शनिबार साँझ ६ः३० बजे सी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच शीतलनिवासमा भेटघाट हुनेछ ।
त्यसपछि ७ः३०बजे विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्मानमा सोल्टी होटलमै आयोजना गरेको रात्रीभोजमा सहभागी हुनेछन् ।
आइतबार करीब १०ः३०देखि १२ः३० बजे सम्म सीसँग प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको भेट देखि द्धिपक्षिय संझौतामा हस्ताक्षर सम्मका कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ ।
जिनफिङ १२ः३० बजे बेइजिंग प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनले काठमाडौंमा जम्माजम्मी १९ घण्टा जति समय बिताउँनेछन् ।